iSpyoo Spy App Maqaallo
iSpyoo offers a whole arsenal of powerful monitoring features. Aamusnaan socdo ku hareeraysan telefoonka, fariimaha qoraalka ah, Goobaha GPS, faahfaahin call, sawiro, bulshada hawlaha warbaahinta and more. This page will take you through a list of our innovative features and this is where you can learn all about how each feature can work for you. Scroll through the page to learn more about all that iSpyoo leeyahay in ay bixiyaan. Waxaad ku raaxaysan karaan, kuwaas oo dhan muuqaalada weyn ee hal xirmo weyn.
View dhan magacyada iyo lambarada ku kaydsan kitaabkii cinwaanka.
Eeg faahfaahinta kale, sida cinwaanada, emails, jagooyinka xirfadeed, iwm.
Waalid ahaan aad dareen ka qabto oo aad ilmahaaga la xiriiraya iyada telefoonka gacanta. Waxaa laga yaabaa in aad ogaato oo ku saabsan ilmaha kale in aadan rabin in ilmahaagu ka soo xiriir. Ama waxaa laga yaabaa inuu qof iyada waxaa la xiriiraya qariib ah waa inaad kuwaas oo. You need to know who your child is contacting in order to protect them. iSpyoo records all contacts that are saved on the mobile phone.
Eeg oo dhan tirada iyo magacyada ku kaydsan buugga telefoonnada.
Dhex mara entries qorin ee phone bartilmaameedka ah.
All phonebook entries are uploaded to your online iSpyoo guddi gacanta oo aad heli kartaa meel kasta oo leh internet ah
Ka eeg faahfaahinta xiriirka kale in uu badbaadeen, sida cinwaanada, IDs email iyo dhalashada.
iSpyoo allows you to look at all the phone book entries of the target phone. Iyadoo iSpyoo, aad awooddo
View dhan entries gudahood Task Log iyada oo loo marayo naftaada telefoonka.
Fiiri kulan kasta qorsheeyey ama hawl la sugayo.
Helaan faahfaahin macluumaad ah ee laga soo galo kasta, ee muhimka ah sida, taariikhda, iyo ku daray qoraalo wax.
Dhammaan macluumaadka Task Log la uploaded rogtid oo aad online iSpyoo guddi gacanta in aad ka heli karto by gasho waqti kasta, meel kasta la xiriir internet ah.
iSpyoo lets you access all the entries in Task Log made on the target’s Smart Phone. Iyadoo iSpyoo spy app for smart phones task log, aad awooddo
iSpyoo lets you Spy Viber, Spy Facebook Rasuulka, Spy iMessage, Spy Skype, Spy WhatsApp that are sent and received through the target phone. Iyadoo iSpyoo aad awooddo:
Ka eeg faahfaahinta ah wicitaano lacag la'aan dhigay via Viber.
La soco diray oo helay iyo sawiro Qoraallada.
View group-fariimo Guda fadhiga.
Helaan xogta ka PC Internet-karti wax.
Read chat fariimaha la isweydaarsaday iyadoo kuwa kale ee isticmaala Facebook
Helaan macluumaad ka aad Control Panel.
View sheekaysiga iMessage oo dhan.
Eeg magacyada IM iyo tirada dadka ee wada hadalka iMessage ah.
Hel waqtiga iyo taariikhda stamps si ay u ogaadaan marka chat kasta dhacay.
Hel helitaanka wixii sawiro, videos ama files audio u cid diray dalka iMessages oo badbaadiyey on phone bartilmaameedka.
Dhammaan macluumaadka iMessage raad waxaa uploaded in aad online iSpyoo control panel which you can be accessed from anywhere with an internet connection, waqti kasta.
View dhan wada hadalka chat Skype.
View dhamaystiran Guda wac Skype.
Ogow magacyada iyo tirada dadka ay la sheekeystay oo wacaya.
Hel waqtiga iyo taariikhda stamps si ay u ogaadaan marka chat kasta ama soo wac dhacay.
Hel helitaanka wixii sawiro, videos ama files audio u cid diray dalka Skype iyo badbaadiyey on phone bartilmaameedka.
Dhammaan sheekaysiga chat Skype iyo Guda wac yihiin uploaded in aad online iSpyoo guddi gacanta oo aad heli kartaa meel kasta oo leh internet ah.
Si toos ah u helaan warbixinta ka Control Panel.
Eeg URL kasta oo uu soo booqday.
Fiiri iyada oo websites user diirada ayaa ku soo booqday.
Dhammaan URLs website booqday yihiin uploaded in aad online iSpyoo guddi gacanta oo aad heli kartaa meel kasta oo leh internet ah.
Hel waqtiga iyo taariikhda stamps si aad u ogaato karaa marka website kasta waxaa lagu soo booqday.
Soo ogow inta jeer user diirada ayaa ku soo booqday website kasta.
Eeg oo websites ayaa bookmarked.
Eeg markii website kasta oo jecel ayaa la heli.
Si toos ah Falanqeeyaan macluumaadkan ka Control Panel.
Shaqaalaha Your isticmaalka telefanada gacanta shirkadda loo diro loona helo emailka. Waxa kale oo diraya iyo helaya emails shaqsi ah la telefoonka gacanta? Maxay ku saabsan diraya sirta shirkadda in ay u tartameen? Waxaad u baahan tahay iSpyoo to keep tabs on your employees’ hawlaha email telefoonka gacanta. Cunugaagu wuxuu isticmaali karaa app telefoonka gacanta email ah in ay kor u xisaabaadka ee website-yada warbaahinta bulshada. Waxaa laga yaabaa in aadan rabin in ilmahaagu ka sameysataa xisaab in aanad garanayn oo ku saabsan. iSpyoo will help you learn the truth about what emails they are sending and receiving.
iSpyoo lets you view all emails that are sent or received through the target phone. Iyadoo iSpyoo aad awooddo:
Dhammaan emails yihiin uploaded in aad online iSpyoo guddi gacanta oo aad heli kartaa meel kasta oo leh internet ah.
Fiiri emails badelay dhex codsiyada email caan ah.
Akhri dhammaan emails galaysa iyo kuwa baxaya telefoonka bartilmaameedka.
Akhri waxa ku jira email kasta.
Hel faahfaahinta cinwaanka email ah oo dhan, mararna oo qaata.
Eeg stamps waqtiga iyo taariikhda si aad u ogaato marka email kasta waxaa loo diray.
Cayayaan nooc kasta oo ka mid ah deegaanka.
Calan markii qoro.
Maamul dhiba ah oo aad marin u duubay via aad Control Panel.
Si aad u hesho qoto-dheer aqoonta ah ka sii mid ah hawlaha ilmahaaga, clips audio qarsoon ee ku hareeraysan telefoonka ee lagu duubay ka Panel Live Control. Waxaad kala dooran kartaa tirada daqiiqo in aad rabto in aad clip ka audio in ay ka hor kuu soo diri amarkii. Markaas cajalado waxaa si deg deg ah uploaded in goluhu ay aad u ciyaaro markasta oo aad diyaar u tahay. Dhageysiga ku hareereysan ee ilmahaaga inta ay ka maqan yihiin kaa caawin doona inaad u sii ammaan. Waxaad maqli doontaa haddii la helo ka baxay gacantii, oo ay caddayn inay qaado talaabo marka loo baahdo.
Phone bartilmaameedka ah kuma ogaan karo in aad dhegaysigooda.
Fudud SMS amarka in phone bartilmaameedka dir ama isticmaal online ah iSpyoo remote control to activate the Live Call Intercept feature.
Dhegayso in si kasta oo wac socda lagu sameeyey ama ka phone bartilmaameedka.
Ka dib markii ay hawshooda, waxaad ku dhagaysan kartaa in wicitaanada oo isticmaalaya telefoonka wax. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay wac call a in lambarka taleefanka ee diirada u saaran iyo lagugu xiri doonaa.
Kolkiiba arki duubo oo dhan wacay ama xilka.
Calan u tiro sanyihiin aad rabtid in aad diiwaangeliyaan qofka soo wacay ama ka soo.
Dhegayso duubay si toos ah ka aad Control Panel ama iyaga soo bixi in aad PC.
Intee waqti calls telefoonka ilmaha ama qaadashada bixisaan oo shaqaale la telefoonka gacanta? Yaa yihiin ay wacaya iyo marka? Iyadoo iSpyoo Smartphone Monitoring Software you can monitor their phone call information. Ogow oo ay soo wac, markii ay soo wac, iyo inta waqti ay ku bixiyaan wac kasta.
Waxaad farriin u phone number kasta oo aad rabto in ay ku jiraan tiro kasta ee telefoonka bartilmaameed ee xiriirada liiska soo diri kartaa.
Si fudud u qor fariin SMS ah oo aad ku iSpyoo control panel and send an SMS to any number through the target phone.
Fariin SMS ayaa mari doontaa phone bartilmaameedka si qaataha wuxuu u malaynayaa in SMS ayaa la helay ka phone bartilmaameedka.
Content ayaa fariin qoraal kasta
Haddii fariin qoraal ahaa socda ama xilka
Qofka dirayo / Qaataha fariin qoraal ah
Taariikhda iyo xilliga uu fariin qoraal ah
Si toos ah u hellaan macluumaad ka aad Control Panel.
Kolkiiba arko halka hadda khariiradda dhamaystiran.
Hubi taariikhda wadada faahfaahsan muddo cayiman gudahooda.
Aqoonso meesha uu xitaa marka GPS aan la heli karin.
Ka soo qaad shirkadda aad bixisaa telefoonada gacanta si ay shaqaalaha aad beerta ku. Sidee baad ku ogaan haddii ay ku safraan meelo ay xilsaaray? Ama qiyaasi ilmahaagu kuu sheego in ay yihiin booqashada guriga saaxiib in aad raalli laakiin halkii uu aado meel aad iyaga u sheegay in aan tago. Iyadoo iSpyoo Smartphone Monitoring Software you will know exactly where your employees or children are when they are away.
Postions GPS yihiin uploaded ee bareeg markii aad ka dooran la xiriir ah in ay map a a.
Qaangaarka doonayaa in aan noqdo qabow iyo aqbaleen dhiggooda ah iyo kuwo si aad ah u saameeyay Ganacsiga moodaha oo quruxduna maanta. Waxa ay u muuqataa ay cadaadis ka badan sidii ay u riixaan baqshadda marka ay timaado sida ay u labistaan ​​iyo fal. Casriga hadda iyaga siin fursad ay qaadan dhimin sawiro iyo iyaga boostada meelaha sida Facebook, Twitter oo MySpace. Waxay u malaynayaan ay yihiin oo kaliya madadaalo iyo wacdarro qof hab gaar ah, laakiin xaqiiqdu photos waxaa loo isticmaali karaa iyaga ka gees ah iyo waxaa jira dad badan oo creepy halkaas in ay raadiyaan noocaan ah photos posted. Isticmaal iSpyoo to learn the truth about what photos and videos are being taken with your child’s cell phone.
View sawirada sida slideshow ah ama sida thumbnails marayo iSpyoo control panel.
Download sawiro si aad computer.
View dhan sawirada ku kaydsan phone bartilmaameedka.
Fiiri waqtiga iyo taariikhda stamps markaan arko sawirada la geeyay ama lagala soo bixi.
Dhammaan photos yihiin uploaded in aad online iSpyoo guddi gacanta oo aad heli kartaa meel kasta oo leh internet ah.
View dhan videos ka soo dejisan in qalab bartilmaameed.
Eeg markii ay la geeyay.
Helaan macluumaad si toos ah ka Control Panel.